Engxenyeni ngonyaka odlule yesibili, "Yamaha" abameleli besigaba US inkampani baziswa ngokomthetho kwethulwa umugqa entsha watercraft siqu 2014 ngonyaka isampula. onjiniyela yenkampani akazange kakhulu ukushintsha nokulungiswa odlule yamanzi Scooters, kodwa ezintsha ezithile ezinye "Yamaha" (jet eqhweni) namanje wathola. On azishiye uyoboniswa okuxoxwe ngazo kulesi sihloko.
Ngokungangabazeki, lezipho ezintsha eyinhloko ukuvela injini entsha. It izofakwa cishe zonke watercraft siqu "Yamaha". izici Technical models ifakwe kubo, kukhona kunazo zonke, okwakwenza inkampani phakathi ukhona. Motor has a umthamo zokusebenza 1812 cubic ngamasentimitha. Lokhu emine lesimbi isitshalo has amasilinda amane, futhi ifakwe i intercooler. izinkomba Olunembile zako phezu eyandulela ayikahlanganiswa eyaziwa ngokuqinisekile. Ngesikhathi esifanayo, ngokusho isimemezelo esemthethweni inkampani "Yamaha", inkinga watercraft 2014 baba namandla kakhulu amaphesenti angu-25. Ngaphezu kwalokho, usalokhu uyimfihlakalo - noma injini entsha izofakwa kuzo zonke izinguqulo komugqa «Waverunnen», noma kuphela imodeli iwuhlelo, okuyinto kubhekwa FZR, FX SVHO, FZS futhi FX Cruiser SVHO.
Ngaphezu sokuphehla amandla, nokuziqhenya yayo wangempela onjiniyela Japanese ukubiza namanye izingxenye. Ikakhulukazi, kulesi simo sikhuluma entsha futha ayisishiyagalombili-siteshi, okuyinto anemisila entsha "Yamaha" (jet eqhweni). I Onjiniyela zithi inikeza isilinganiso elikhulu ivolumu yenjini kanye traction. Kuyinto imfihlo ukuthi ukwanda umthamo we ibhayisikili amanzi amandla plant kuholela yokuthi iba "emincanyana." Abacwaningi baye kunakwe lokhu ehilelekile ekuthuthukisweni kwemikhiqizo emisha ezikhokhelwe ngenxa ukunakwa ukuthuthukisa handling wabo. Uma uthi nhlá, izinguquko akuzona lubonakale, kodwa kancane ukulungiswa emizimbeni akavunyelwe ukwenza Scooters izinze kakhulu.
Umugqa aseqala 2014
Ukuze uthole ukwazi abathengi nebangomuso imikhiqizo yabo, inkampani yokukhiqiza ukhiphe ividiyo ekhethekile. It is Kunikezelwa uchungechunge FZ. Ngemva kokubona kuba sobala ukuthi entsha jet ski "Yamaha" (isithombe kungabonwa ngenhla) yisisombululo omuhle kakhulu kulabo abathanda ukugibela "ngomoya." Sibe nethuba wonke ukubheka uchungechunge «Waverunner» esenzweni ngenkathi njalo, US, lapho wangenela ngokusemthethweni. Kufanele kuqashelwe ukuthi jet eqhweni izinkampani iqhaza njalo futhi ngokuphindaphindiwe ubulapha wokunqoba.
Izindleko watercraft entsha
Ekuphetheni, kukhulunywa kufanele kwenziwe olayinini lapho izindleko imikhiqizo emisha. Amanani "Yamaha" (jet eqhweni), ngonyaka imodeli 2014 amayelana okufanayo. Ikakhulukazi, imodeli FZR, kanye FX Cruiser Sho, kuyodingeka bakhokhe 14.990 aseMelika. Ziyakwazi eqolo salo lonke umugqa. Ukuguqulwa FX sho izobiza 14 399 zamaRandi, futhi VXS - e 11399. Inketho ezingabizi kakhulu uyisibonelo VX Ezemidlalo, okuyinto intengo US 7999 dollar.
Scooter "Vyatka": adventure "Italian" ngesiRashiya
Yamasaki Scorpion - nedoskuter endaweni igobolondo amahle
Laparoscopy: ukubuyekezwa, ukufundwa, ukuqeqeshwa
Iplanethi enkulu kunayo yonke indawo
Iyini iresiphi? Classic zokupheka
Candy iresiphi, uzilungiselele ngezandla zabo
Adjika Georgian. isinongo Spicy for inyama izitsha